Ankylosing spondylitis: Izimbangela, Izimpawu, zokwelapha
Ankylosing spondylitis noma ankylosing spondylitis - i isifo ukuvuvukala, okuyinto ezingamahlalakhona futhi sithinta nemisipha articular namadivayisi umgogodla, sacroiliac amalunga omzimba, ehlombe hip amalunga omzimba.
Ankylosing spondylitis: Izimbangela
isifo Spondylitis eba ngokuvamile kakhulu abantu abane yofuzo nezici ezithile zofuzo. It is wafakazela ukuthi lesi sifo landile abantu abathwele hla-B27 zofuzo. Naphezu kwalokhu, abantu abangekho izikhulumi bomdabu, futhi, kungaba ugula ngakuwo, nje abakhangayo banamathuba amancane. Kodwa akubona bonke abathwali isakhi sofuzo ngempela agule.
Indima kakhulu ekuthuthukeni ankylosing spondylitis play kanye nezifo esicashile, futhi ukulimala, futhi umkhuhlane, futhi hypothermia, futhi izifo ezibangelwa amagciwane. Abacwaningi baye bathola ukuthi lesi sifo ngokuyinhloko zengqondo, ngakho izifo bangalindela avuse izici isimiso sezinzwa futhi psyche, okuqhubeka isikhathi eside noma ukucindezeleka okunzima.
Ankylosing spondylitis: izimpawu eziyinhloko
Ankylosing spondylitis ngokuvamile iqala ngamadijithi wesibeletho noma sciatica lumbar - wazizwa esiphambanweni abukhali kwesingezansi phezulu noma kusukela entanyeni kuya ingalo. Ekuqaleni, izimpawu zingase zifane abavamile ukhwaliti ubuhlungu emuva. Isiguli ekhononda of ngokulinganisela ubuhlungu, sibi emva ukuphumula futhi ukuphumula noma ushintsho sezulu. Futhi emva Ukushisa nokukhanya umsebenzi ukungakhululeki ziyancipha.
ubuhlungu Emuva ekuqaleni ukuqedwa kalula ngemikhiqizo ye izidakamizwa nonsteroidal eqeda ukuvuvukala, futhi odokotela abaningi bathi: "ukhwaliti ubuhlungu emuva". Ukungabaza ziqala lapho, ngemva kwezinyanga ezimbalwa yokwelashwa, ubuhlungu akuyona kuphela hhayi ziyancipha, kodwa ezikhulayo. Kulokhu, ubuhlungu ngokuvamile nakakhulu ngesikhathi 3-5 ezimpondweni ekuseni ntambama kancane abohle.
Ngaphandle isigqi ubuhlungu ngesikhathi uphethwe kubonisa ekuseni ukuqina oluqinile beqolo, ngokuvamile inyamalala eyodla, kanye esemncane isiguli - osteochondrosis ogulayo ngokuvamile abadala, futhi Ankylosing spondylitis - intsha iminyaka 20-27. Ngaphezu kwalokho, ingxenye yazo zonke iziguli ekuqaleni lesi sifo ukuvuvukala kwamehlo, kwesisindo nomkhuhlane.
A uphawu ejwayelekile zesifo - okwandisa ukuqina emgogodleni, kanye ukwehla okukhulu ukuhamba kwesifuba. Imvelo kanye nohlobo ukubukeka lesiguli. Ekuqaleni lesi sifo isivele inyamalala ugobile evamile yomgogodla, futhi okhalweni bese iba iqonde futhi flat. Kamuva thoracic zilimaze owayesekhokhoba livela okubizwa ngokuthi "Ukuma egciniwe." Lapho uhamba imilenze egulayo zihlale emadolweni prisognutymi.
Ankylosing spondylitis kanye nokwelashwa kwayo
Izingxenye ezisemqoka ekwelapheni lesi sifo - a izidakamizwa ezingekho steroidal anti-inflammatory. Abazincomayo ukuthatha izifundo eside njalo, iminyaka 1-5.
Ngo exacerbations yesifo kufanele ziyise esiphezulu ngemithamo evumelekile, uma exacerbation is ekunqandeni ngokwanele 1 / 3-1 / 4 umthamo ibekezelelwe kukhonjisiwe isichasiselo. Kusukela la amalungiselelo umphumela maximal kunikezwa diclofenac, Phenylbutazone, indomethacin, ketoprofen, nemikhiqizo yalo. kusiza abaningi kahle ekulungiseleleni enzyme Wobenzym. It has a immunoregulatory omnene, anti-inflammatory anti-edematous senzo. Futhi ankylosing spondylitis kuyasiza ukwandisa Ukuzivumelanisa nezimo sokukhubazeka komgogodla.
Yabela imiphumela zendawo umjovo ku ngalo ingaphakathi ahlangene hormone ngama-corticosteroid futhi licindezele Dimexidum. massage ezisebenzisekayo emuva. Kuthinta nenzuzo hhayi kuphela nomgogodla, kodwa ngokuvamile umzimba wonke. Kodwa ukukwenza udinga ngezikhathi ukuchuma lixhomeke kokuthile, ngokungabi bikho ukuvuvukala nezisobala. Phakathi nale nkathi, uma nawo asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo udaka kwezokwelapha.
Ill nalesi sifo futhi spondylitis Kunconywa ukwelashwa spa. Indawo ebalulekile ekulweni Ukuqina sekuyenzeka yomgogodla nokuqina okwandisa kuthatha Physiotherapy. Kumele kwenziwe nsuku zonke, okungenani isigamu sehora.
Ankylosing spondylitis: izinkinga ezibangwa
Ankylosing spondylitis kuyingozi hhayi kuphela ngoba immobilizes lonke emgogodleni ngokuhamba kwesikhathi, kodwa futhi izinkinga. Kulawa, ingozi enkulu yomthambo i-aorta ne-inhliziyo. Ngo 1/3 ye iziguli ziba izinso ukonakala, okuholela nokwehluleka ukusebenza kwezinso. Ukuncishiswa ukuhamba kwesifuba kungabangela isifo sofuba samaphaphu izifo.
Ukuvimbela lezi yezinkinga kuyadingeka nokwelapha lesi sifo kusaqalwa.
Dizzy nalapho uvuka. Kungani?
Valgus deformity ka kwedolo: isithombe, izimbangela, ukwelashwa
Ophthalmology: lapho kubhujiswa lesi Vitreous iso
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ukunciphisa umzimba fast ekhaya, hhayi kuphela
Funny skits inkampani: amahlaya, abafana futhi inganekwane
"Gerpferon" (wamafutha): yokusetshenziswa, ngempela
Sauce ukuze nezimfanzi
Biotherm izimonyo. Izibuyekezo